सुत्केरीलाई दूधदही नदिने गरेको आरोप ! – इन्सेक
सुत्केरीलाई दूधदही नदिने गरेको आरोप !
डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामका महिलाहरूले सुत्केरी भएका बेला गाईभैँसीको दूध नदिने गरेको आरोप लगाएका छन् ।
सुत्केरी महिलालाई आफ्नै घरमा पालेको गाईभैँसीको दूध दिँदा गाईभैँसी बिग्रने रूढीवादी परम्परा अहिले पनि यहाँको समाजमा विद्यमान रहेको छ ।
सुत्केरी महिलाका लागि अत्यावश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा दूधदही आफूले नपाएको अमरगढी नपा–१ मालुमकी मनिशा रोक्काले बताए ।
‘गाउँतिर त धेरै छ । अमरगढी नगरपालिका भित्र समेत सुत्केरीलाई आफ्नै घरमा पालेको गाइभैँसीको दूध दिइँदैन ।’–उनले भनिन्–‘बरू दूध बजारमा लगेर बेच्छन् । तर, गाईभैँसी बिग्रन्छ भनेर सुत्केरीलाई खुवाउँदैनन् ।’
सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनुपर्छ भन्दै गाउँगाउँमा सचेतना अभियानहरू चलाइएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य चौकीमा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरू र उनका आफन्तलाई सुत्केरी अवस्थामा पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउनु भनेर सम्झाई बुझाई गरेर पठाउँदा समेत घरमा गएर उनीहरूलाई दूधदही जस्ता पोषणयुक्त खानेकुरा नदिने गरेको भुमिराज स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत अनमी शान्ति भट्टले बताइन् ।
जिल्ला सदरमुकामभित्र नै सुत्केरीलाई घरको तल्लो तलामा रहेको गोठमा राखिन्छ, कतिपय ठाँउमा त गाईभैँसीको गोठमा समेत राखिने गरिएको छ ।
घरको माथिल्लो तलामा राखे देउता रिसाउँछन् भन्ने परम्परा रहिआएकाले सुत्केरी महिलाहरूलाई समस्या हुने गरेको अनमी भट्टले बताइन् ।
सुत्केरी महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुराबाट वञ्चित गर्दा बालबालिकामा कुपोषण देखिने अमरगढी स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख लोकराज पनेरूले बताए ।
महिला सुत्केरी हुँदा झन् बढी मात्रामा पोषिलो खानेकुरा आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । सुत्केरी अवस्थामा पोषिला खानेकुराको अभाव हुँदा अमरगढी नगरपालीकाभित्र रहेका ५ वर्ष मुनिका २ हजार ४ जना बालबालिका मध्ये २६ जनामा कडा शीघ्र कुपोषण र २ सय ३५ बालबालिकामा मध्यम शीघ्र कुपोषण देखिएको नगर स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख पनेरूले बताए ।